Marine iyo LNG-Marine iyo LNG-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan waalka waa sumadeena)
Hoyga>Codsiyada>Marine iyo LNG
Waqtiga: 2020-10-09 Hits: 39
Maqnaanshaha dhuumaha, hydrocarbons-ka gaaska leh ayaa si hufan loo qaadi karaa oo loo kaydin karaa marka loo beddelo xaalad dareere ah.
Gaasaska batroolka waxay ku cabbaan heerkulka hareeraha iyagoo ku cadaadinaya dhowr baarar (LPG), laakiin methane (gaaska dabiiciga ah) wuxuu u baahan yahay in la qaboojiyo -160 ° C si uu u noqdo LNG.
Qaliinka "heerkulka hooseeya" waa kuwa lagu rakibay cimilada arctic ama laga yaabo inay soo gaadho diiqad dhaqso ah oo gaas ah (hoos u rido) kiiskanna waxaa laga yaabaa inuu "ku shaqeeyo ama uusan ku jirin" xaalad qaboojiye ah oo ah shaqaynta qaabeynta la amray.
Fiilooyinka "Cryogenic" waxay caadi ahaan gacanta ku hayaan gaaska dareeraha ah, oo sida LNG u baahan inay ku shaqeeyaan heerkul aad u hooseeya.
Farsamooyinka laba-geesoodka ah ee loo yaqaan 'cryogenic valves' waxay u baahan yihiin nidaamyo gaar ah oo fadhiga ah oo ka reebaya dareeraha dareeraha godadka jirka iyo dammaanad qaadka waxqabadka xiritaanka hoose.
Titan waxay soo saartaa cryogenic Gate, Globe, Check, Ball & Butterfly valves iyo sidoo kale kantaroolada kontaroolada loo qaabeeyey una qalma BS-6364 oo leh baaritaan balaaran oo ah -196 ° C (Helium oo lagu tijaabiyay hoosta Liquid Nitrogen).
Awoodda tijaabada Titan ee filtarka LT & CRYO waa baaxad weyn (dhowr qaybood oo tijaabooyin ah, NPS 24 ”ayaa horey loo keenay).
Waad ku mahadsan tahay waayo-aragnimo ballaaran iyo horumar joogto ah oo ay xaqiijiyeen waaxyadeena R&D ee leh xarumaha baaritaanka la xiriira waxaan awoodnaa inaan damaanad qaadno waxqabad la isku halleyn karo oo loogu talagalay suuqa LNG oo dhammaystiran oo ay ku jiraan, geeddi-socodka liquefaction (sidoo kale xeebta sida FLNG), kaydinta, gaadiidka badda iyo dib-u-shidaalka goobaha isticmaalayaasha dhammaadka.
Nidaamka ama codsiyada ay ku jiraan gaasaska kale ee dareeraha dareeraha ah (tusaale ahaan Ethylene) ayaa lagu soo daray awoodda dhabta ah.